Nangona i-9 yokutyunjwa kwebhankaso yefilimu ehloniphekileyo, ukudala umlawuli othandwayo wathatha kuphela i-3, enye "Avatar" yombuzo. Xa i-Avatar yamabonakude eyaziwayo ikhutshwe, umqondisi uJacob Cameron watshintsha kakhulu, kwaye umsebenzi wakhe wenyuka phezulu.
UCameron uye waqhathaniswa noKumkani Midas, owajika yonke into ibe yigolide nantoni na ayithintekayo. Zigweba wena: ezimbini zeefilimu ezi-5 ezibhekiselelwe kumlawuli - "Titanic" (ngo-1997, 11 "i-Oscars" kunye ne "Avatar" (2009) - yaba yinto ephezulu kakhulu kwimbali ye-cinema yehlabathi. Owokuqala wathola i-1.84 billion kwibhokisi yeofisi, kwaye okwesibini wenza imali echithwe ngokupheleleyo-phantse i-$ 2.5 billion (kwaye oku kuphela ekupheleni kukaFebhuwari). Ukumemezela umnqweno wokurhoxisa ukuqhubela phambili kwe-blobusbuster fantastic, uCameron inselele ... Iplank "Avatar" yaphakanyiswa kakhulu, oko kuthetha ukuba uYakobi akayi kuphinda ahlale eyiminyaka emininzi kwaye intsapho yakhe iya kuqhubeka isinda enye "yokucwiliswa" kwendalo yentloko. Nangona kunjalo ukuba umdali we-Avatar, umqondisi uJacob Cameron - eCanada, ukuthanda kwakhe umsebenzi ngokuqhelekileyo ku-American. Akuyena wonke umfazi onokumkela oku.
Amantombazana avela kwi "sandbox"
UCameron wahamba kathathu ngaphantsi kwe-aisle. Ngesihlandlo sokuqala, wazibophelela emtshatweni noSharon Williams, umgcini we-waitress wase-Los Angeles ye-Bob's Big Boy yokutyela e-1978 ekude. Emva koko, umfana oneminyaka engama-23 ubudala, emva kokubukela "Iimfazwe zeNkwenkwezi" ukuyeka umsebenzi weqhubi lomloli waza wagqiba ekubeni ngumlawuli. Kwiminyaka emithandathu, uSharon wayezama ukuphumeza umyeni wakhe emva kwesikrini esibhakabhaka, kodwa engaphumeleli. Emva kokususa i-film engama-12 engama-fenethi yemifanekiso ye-science ethi "Xenogenesis", uCameron wazihlalisa umhlobiso kwi-studio edumile yefilimu ifilimu eziphantsi kwebhajethi uRoger Corman. Kwaye kwiminyaka embalwa kamva wakhula waya kwisihlalo somlawuli. I-pancake yokuqala - ukuqhubeka kwefilimu "iPiranha" (1982) - yavela ngaphandle. AmaTaliyane, awakhiqiza umfanekiso, anikwe imali encinane kakhulu, kwaye abadlali befilimu abazange bathethe isiNgesi nonke. Kwakukho nezinye izinto ezininzi. Nangona kunjalo, uYakobi wakwazi ukuziphendulela nakwi-fiasco yokuqala. Kwimeko yoxinzelelo olunzima, wayenomsebenzi wokuba umbulali we-robot uthunyelwe kwixesha elizayo ukuba ambulale. Ekuseni, leli phupha laba ngumgaqo we "Terminator". Ngaphandle kokucinga kabini, uCameron wathengisa isicatshulwa kuGail Anne Hurd, intloko yokuthengisa eKorman, ngokuba ... 1 idola. Enyanisweni, ukuthatha izithembiso ezimbini kwintombazana: uya kuthatha imifanekiso yakhe kwaye uGail uya kuba ngumkakhe. Ngoko bonke baye bashiya. Ngohlahlo lwabiwo-mali lwama-6.5 yezigidi, i-Terminator (ngo-1984) inyuse malunga ne-$ 80 yezigidi, yaziswa kuJames Cameron udumo lomlawuli kunye ne-screenwriter, kunye no-Arnold Schwarzenegger, eneenkwenkwezi kwinqanaba elibhaliweyo, njengengqungquthela.
Ukususela ngoko, umsebenzi kaCameron uye wenyuka intaba. Ubhala umlandeleliso kwi-"Aliens" (1986) kunye nomtsalane ("Oscar"). Ekugqibeleni, "iNtlango" (1989) ... Isicwangciso saloo ntliziyo enomdla uJames oneminyaka engama-12 sakhula kunye nesifundo se-biology. Esikhundleni sokuphulaphula i-pistils kunye ne-stamens, wabhala ibali malunga nomhlangano wabantu abahlukahlukeneyo nabemi bezinzulu zolwandle. Kwisethi "sotshasayo" kumlawuli, igama lesidlaliso se-Iron Jim lazinyuliswa ngenxa yokuzinikezela kwakhe kunye nokusebenza kakuhle. Isabelo seengonyama sefayili sasingaphantsi kwamanzi. UJames kunye nomntakwabo, injini ye-aerospace eneemfuno ezizodwa kunye nesigxina ekuthiwa yiyo, hhayi nje kuphela ngeekhamera ezikhethekileyo zokudubula ngaphantsi kwamanzi, kodwa nangomgudu wokukwenza yonke into ibe sisondele kwizinto ezibonakalayo ezinokuthi zakhiwe kwi-12 meters. Ngaphantsi kwelokudubula kwatshintsha amathangi amabini amakhulu kwisixhobo samandla enyukliya esingapheli. Isikhathi sokuphela kwesibhozo sasiqhutyelwa kathathu kwaye sasiqhutyelwa iminyaka kunye nesiqingatha, iqela lomqondisi uJames Cameron wasebenza phantse ngaphandle kweentsuku. Yongeza kule nto irascible uhlobo lomlawuli, ngubani, kungakhathaliseki ukuba isini kunye nobudala, akanakuzezelele ekukhetheni amanyathelo - akuyimfuneko, kwaye uyazibuza indlela abaphantsi kwakhe abavakalelwa ngayo "i-crazy canada". Kodwa akukho ncinci ngaphandle kokulungileyo: "Inzosha" kunye nokutyunjwa kwezine "u-Oscar" kuye kwomeleza isikhundla sakhe njengomlawuli onetalente, umgcini wesikrini kunye nomvelisi. Kodwa i-cash front kwakhona yavela emnyama.
Inzondo ye "Oscar"
Umfazi wesithathu kaYakobi wayeyintombazana evela "kwi-sandbox yakhe," elandelwa nguKatryn Bigelow. Inkonzo yothando, ngokutsho kwe-Iron Jim, yindlela efanelekileyo yobudlelwane nabasetyhini. Enyanisweni, kulungile ukuba loo mbhangqwana isebenza kwiprojekthi enye ... UCameron wakhiqiza uCatherine ukuba ube nomdla ovuyayo "Ngowe-1989) kunye noKeanu Reeves noPatrick Swayze kwiimbopheleleko. Kwisetyenziswe, uYakobi weza nomphumo wenguqu ("morph"), awayeyisebenzisa ekudaleni umbulali we-robot T-1000, ozalelwa kwi-drop of metal etyhidiweyo, ngexesha le "Terminator" (1991). UJacob noCatherine baphila iminyaka emibini, kwaye emva koko baphambukela ngobuchule. Bigelow, okanye kunoko, ifilimu yakhe yakamuva malunga nemfazwe e-Iraq, "INkosi yeSiphepho" yaba ngumncintiswano kwi "Avatar" yakhe (zombini imifanekiso yonyulwa i-Oscar kwiintlobo ezili-9).
"Inkcaso yabangaphambili" intatheli yabiza intloko enkulu ye "Oscar" kwaye le ngongoma yayigxininiswa kude kube ngumzuzu wokugqibela. Uphumelele ... Bigelow, ukuthatha i-statuettes kwiindidi eziphambili "I-Film Best" kunye "noMlawuli oPhezulu".
Emva kukaKatherine, ngo-1997, uYakobi kwakhona, ngaphandle kokushiya "kumatshini", watshata inkwenkwezi ye "Terminator" uLinde Hamilton. Ukwahlukana emva kweminyaka emibili ixabisa iCameron i-$ 50 yezigidi. Isihlanu kunye nomzuzu wokugqibela umlawuli odumileyo-uSusie Amis - naye ungumdlali we-actress. Wadlala kwi-Titanic, umzukulu kaRosa. NgoJuni 4 kulo nyaka, uYakobi noSusie baya kubhiyozela iminyaka elishumi yobomi bomtshato. KuCameron le ngxelo. Kwaye, mhlawumbi, uhlakaniphile uSuzzi waqaphela ukuba iCanada yokudala ihlala ilahlekile iholide lolwandle. Wazala abantwana abathathu abathandekayo: UClaire kungekudala 9, kunye namawele ama-Quinn no-Elizabeth Rose-iminyaka emithathu. Ngendlela, xa uCameron ehamba nabo e-Disneyland, ukumncoma kumnandi akuveli ebusweni bakhe.
Ukuba umntu uthi "Ndiyamthanda" kwintlanganiso yokuqala
Umyeni ongaqhelekanga uyixhoba lakho
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-calcite
Iinqathe i-honey glaze
Imiba yoLwazi loSuku lwabafundi kunye nabazali-abancinci, abancinci kunye namaqhekeza
9 Iimfashini zeMfashini ezinemibala yeenwele
I-tsokotaki ihamba ngekhilimu e-creamy